AN Ostrovsky 1859 मा सिर्जना, प्ले "आंधी" - जो सार्वजनिक जीवनको कठिन प्रश्नहरू सामाजिक मनोवृत्ति परिवर्तन, अस्थिभंग प्रभावित भएको छ काम। अलेक्जेन्डर आफ्नो समय को विरोधाभास को सार मा penetrated। उहाँले, पैटी tyrants को रंगीन वर्ण सिर्जना आफ्नो भन्सार र जीवनको बाटो वर्णन गरे। दुई तस्बिरहरू tyranny गर्न विपरीत खडा - यो Kuligin र Katerina। तिनीहरूलाई को पहिलो हाम्रो लेख समर्पित छ। "छवि Kuligina प्ले मा" आंधी "- हामीलाई चासो एक विषयवस्तु। AN को पोर्ट्रेट तल Ostrovsky प्रस्तुत।
Kuligina को संक्षिप्त विवरण
Kuligin - एक आत्म-सिकाउनुभयो मिस्त्री, tradesman। Kudryashov (पहिलो कार्य) संग कुराकानी मा यो पाठक कवितात्मक प्रकृति प्रेमीहरूको देखिन्छ। यो नायक को वोल्गा खुल्यो चमत्कार उहाँलाई असामान्य उपस्थिति भनिएको admires। प्ले, एक मा Kuligina छवि Ostrovsky गरेको "आंधी" निम्न विवरणहरू द्वारा पूरक हुन सक्छ। सपनाहरु देखने प्रकृति द्वारा, अहिलेसम्म यो चरित्र विद्यमान प्रणाली, पैसा र शक्ति को भद्दा शक्ति सबै छ जसमा को अन्याय बुझ्छ। उहाँले "क्रूर mores", यस शहर मा Borisu Grigorevichu बताउँछ। आखिर, पैसा छ जो उहाँले थप आफ्नो लेखोटहरूमा एक राजधानी amass गर्न, गरिब बन्धनमा गर्न खोज्ने। नायक आफूलाई गर्दैन। Kuligina को मा विशेषताहरु नाटक "आंधी" बस विपरीत छ। उहाँले सारा मान्छे को हितबारे सपना राम्रो कामहरू गरिरहेको गर्न प्रतिबद्ध छ। अब हामी प्ले "आंधी" मा विस्तृत छवि Kuligina प्रतिनिधित्व गर्छ।
बोरिस संग Kuligina कुराकानी
बोरिस तेस्रो कार्य मा एक साँझ टहलने लागि हामीलाई चासो वर्ण पूरा गर्दछ। Kuligin फेरि प्रकृति, शान्त, हावा admires। सबै ढोका बन्द छन्: तथापि, एकै समयमा त्यो शहर अझै पनि एक Boulevard गराएको छैन, र मान्छे Kalinowo हिंड्न छैन भन्ने तथ्यलाई बिलौना। तर यो चोर देखि, तर अरूलाई तिनीहरूले परिवार tyrannize कसरी हेर्न छैन क्रममा छैन। Kuligin भनेअनुसार "मतवालापन" र यी महल को धेरै "debauchery गाढा।" नायक "अँध्यारो राज्य" को नींव outraged, तर, एक क्रोधित आवाज पछि तुरुन्तै यसो भन्छन्: बोली शब्दहरूबाट प्रस्थान भने "ठीक छ, परमेश्वरले तिनीहरूलाई साथ!"।
लगभग आफ्नो विरोध को म्युट रहलपहल, उहाँले मात्र आपत्ति व्यक्त। प्ले मा Kuligina छवि Ostrovsky गरेको "आंधी" यो अक्षर खुला कल, क्याथरीन जस्तै लागि तयार छैन भन्ने तथ्यलाई द्वारा विशेषता छ। Kuligin जो उहाँले बोरिस गर्छ, आफ्नो "जीवित निल्छ हुनेछ" कविता, लेख्न प्रस्तावको चिच्याउँछन्, र उहाँले र यति आफ्नो भाषण लागि जान्छ भन्ने तथ्यलाई बिलौना।
जंगली गर्न अनुरोध
Kuligin उहाँले निरन्तर र साथ सामाग्री को लागि पैसा दिन जंगली शिष्टाचार सोध्छन् भन्ने तथ्यलाई लागि क्रेडिट दिनुपर्छ। उहाँले तिनीहरूलाई Boulevard Sundial स्थापित गर्न चाहन्थे "साधारण राम्रो लागि।"
Kuligin दुर्भाग्य मात्र मानिसको भाग मा अज्ञानता र rudeness मा stumbles। त्यसपछि नायक कम्तिमा एक आंधी नल शहर मा बारम्बार बज्रपात हुन् मनाना गर्न Savely Prokovich खोज्छ। यो व्यवसाय मा सफलता हासिल गर्न असफल, Kuligin अब केहि तर आफ्नो हात लहराया गर्न सक्छन् र जानुहोस्।
Kuligin - विज्ञान को एक मानिस
हामी नायक रुचि सम्बन्धित प्रकृति आदर, subtly उनको सौन्दर्य सजग संग, विज्ञान एक मानिस छ छन्। उहाँले, हामी एक आधिबेरी वा अन्य कुनै पनि डर हुँदैन भनेर मानिसहरूलाई यो व्याख्या गर्ने प्रयास, भीडलाई एक स्वगत संग चौथो कार्य हुन्छ प्राकृतिक घटना। यो पराउँछु गर्न, तिनीहरूलाई पराउँछु गर्न आवश्यक छ। तर, शहर बासिन्दा उहाँलाई सुन्न चाहँदैनन्। यो समस्या पक्कै हुनेछ - तिनीहरूले आँधी कि पुरानो तरिका द्वारा बाँच्न, यो परमेश्वरको दण्ड छ भन्ने विश्वास गर्छन् जारी।
Kuligin देखाउन मानिसहरू को ज्ञान
प्ले "आंधी" मा Kuligina छवि नायक चरित्र राम्रो न्यायाधीश छ भन्ने तथ्यलाई द्वारा विशेषता छ। उहाँले भावना बुझ्न र समझदार, सही सल्लाह दिन सक्षम छ। वर्ण यी गुणहरू Tikhon संग कुराकानी मा, विशेष, प्रकट गर्नुभयो। उहाँले शत्रु हामी क्षमा हुनुपर्छ, र आफ्नो मन संग बाँच्न उसलाई भन्छ।
यो नायक को बाहिर झिकेर छ पानी मृत क्याथरीन Kabanov र उनको ल्याए, उनको शरीर, तिनीहरूले टिप्न गर्न सक्ने भन्दै, तर प्राण तिनीहरूलाई होइन। त्यो अब Kabanova भन्दा धेरै दयालु छ जो एक न्यायाधीश, अघि ल्याइएको हो। यी शब्दहरू पछि Kuligin पलायन। शोक र केटी को आत्महत्या को लागि दोष हो जो मान्छे संग साझेदारी गर्न असमर्थ के भयो मार्फत जाँदै आफ्नै तरिका यो नायक।
Kalinowo मा हामी नायक रुचि हो - सेतो काग। Ostrovsky गरेको "आंधी" मा छवि Kuligina यो चरित्र सोचाइ अन्य बासिन्दा सोच को बाटो बाट एकदम अलग भन्ने तथ्यलाई द्वारा विशेषता छ। अरूलाई त्यो र आकांक्षाओं र मान। सजग Kuligin कि "अँध्यारो राज्य" को नींव अन्याय, साधारण मान्छे को जीवन राम्रो बनाउन खोजिरहेका, तिनीहरूलाई लड्न प्रयास।
हामी सामाजिक reorganization Kalinov को नायक सपना रुचि राख्नुहुन्छ। र शायद यो सामाग्री समर्थन र जस्तै-दिमाग मान्छे, उहाँले एकदम शहर सुधार गर्न सक्षम हुनेछ पाउन। मानिसहरू, शायद prettiest सुविधा, घटक, सँगै प्ले "आंधी" मा अन्य छवि Kuligina संग हितमा लागि इच्छा।
कसरी Biryukov गर्न मानिसहरू गरे नजिकैको गाउँमा: कारण र अनपेक्षित finale
लामो कपाल थोक थुक्नु: बुनाई मिसिन
भुक्तानी प्रणाली के हो? नगद र गैर-नगद। भुक्तानी प्रणाली
नयाँ डब्लुटीओ दरको लागि एक वान खाली गर्न कति खर्च गर्छ?